Archive du 20171114
Herisetra sy Kidnapping Mifamono ny samy Karana …
Nisy nitifitra tao anaty fiarany marika “Audi” nentiny i Radjan Amiralli Moustapha, teratany karana, omaly alatsinainy 13 novambra maraina tokony ho tamin’ny 8ora latsaka fahefany. Teo ambany kelin'ny Masoivohon'i Alzeria, lalana mihazo an'Ambatobe no nitranga ny hetsika.
650 Ar ny kapoakan’ny vary Mangina ny fanjakana, manaiky ny vahoaka
Tsy misy izay tsy mikaikaika amin’ny fiakaran’ny vidim-bary ny isam-baravarana. Efa tafakatra 650 Ar ny iray kapoaka ho an’ireo karazam-bary zanatany toy ny vary gasy sy ny tsipala, ny makalioka izay hamidy 2.200 Ar ka hatramin’ny 3.000 Ar avy ny iray kilao.
Ady lova teny Ampandrana Voaroaka ny tompon-trano
Hafa kely tamin’izay tranga nisy, raha ny fitantaran’ireto fianakaviana nanao fitarainana manoloana ny fahatongavan’ny vadintany tetsy amin’ny trano fonenany tetsy Ampandrana omaly tamin’ny 6 ora maraina.
AFRIMA 2017 tany Lagos Nigeria Norombahan’i Shyn ny “Révélation 2017”
Norombahan’i Shyn tamin’ny alalan’ilay hirany “Resim-pitia” ny laharana voalohany tamin’ny fifaninanana Afrima 2017 ho an’ny sokajy “Révélation 2017”.
Mahazina-Antsirabe Nahatrarana rongony sy fitaovana fanaovana vola sandoka
Mitohy ny famongorana ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina ao Antsirabe. Saron’ny polisim-pirenena indray ny tokantrano iray ahiana ho mpamatsy rongony tao amin’ny fokontany Mahazina.